Ugwu a ma ama nke kachasi ọkụ ike na 10 | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Uzo akuku osisi ike a ma ama iri na Spain
Portillo nke German | | Igwe ọkụ
Na Spain ike chọrọ n'ọtụtụ ụzọ. Pasent na-aga mmanụ ala, dị ka kol na mmanụ, na pasent ọzọ na ume ọhụrụ. Ọkụ eletrik na Spain anọgidewo na-adịgide adịgide mgbe ọtụtụ mmụba na mbelata na-adịbeghị anya. N'okwu a, anyị ga-ekwu maka iche iche osisi ọkụ na-ere ọkụ ihe dị n’ala anyị na etu ha si arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata otú ọkụ eletrik ina kpuchie na ihe percentages na-ekenye onye ọ bụla oru, dị na-agụ 🙂
1 Eletrik na Spain
2 Meirama ike ọkụ osisi
3 Los Barrios Igwe Ike Ike
4 Narcea ike ike osisi
5 Soto de la Ribera ọkụ ọkụ ọkụ
6 Central Robla
7 Aboño Central
8 Central Andorra
9 Litrobi thermal ike osisi
10 Compostilla Central
11 Puentes de García Rodríguez ọkụ ọkụ ọkụ
Eletrik na Spain
Ọchịchọ anyị maka ọkụ eletrik na ọkwa mba debanyere mbelata na 2014. E kewara mkpuchi nke ume ike n'ọtụtụ mpaghara iji mezuo ebumnuche na oge. E wetara 22% nke ume ike niile site na isi mmalite nuklia. Ike nuklia na-eweta oke esemokwu n'ọtụtụ mpaghara nke ọha mmadụ. E nwere ndị niile na-agbachitere na-ekwu na ọ dị ọcha ma dịkwa mma ike. N'aka nke ọzọ, enwere ndị aghụghọ, ndị na-agbachitere ịdị egwu nke ihe mkpofu ha na ihe ọghọm nuklia dịka nke ahụ mere na Fukushima na 2011.
Ike ikuku, nke dị ọcha na nke emere maka mmeghari ohuru, wetara 20,3% nke ọchịchọ maka ike na Spain. Na-echigharịkwuru ihe dị mkpa, kol, ruru 16,5% nke ike emepụtara. 100% nke ọkụ eletrik site na ọkụ ọkụ, A na-ekesa 86% n'etiti ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ 10 a kacha mara amara.
Meirama ike ọkụ osisi
Therlọ ọrụ ike a dị elu na-anọchi na njedebe maka ịbụ onye na-ewepụta ntakịrị ike. Ọ bụ nke Gas Natural Fenosa. Ọ bụ mgbatị nrụnye thermoelectric. Ọ dị na parish nke Meirama (A Coruña). Ike mmepụta ọkụ ya bụ 563 MW. Jiri kol na mmanụ.
Ejiri ya rụọ ọrụ na Disemba 1980 ma bụrụ otu n'ime ihe kachasị mkpa na mba ahụ dum. Ulo oru a bu ihe ruru 60.000 pesetas. E wuru ya na ntinye ego. N'ụzọ dị otú a, ha jisiri ike were mmanụ a mee ọkụ eletrik. E debere ihe ndị sitere na igwupụta ihe dị ka nde tọn 85.
A na-emepụpụ gas site na anwụrụ ọkụ 200 mita, na dayameta nke 18 mita na isi na 11 na ọnụ.
Los Barrios Igwe Ike Ike
Ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri na-ere ọkụ nke ọkụ na obodo Los Barrios (Cádiz). Ike ya dị gburugburu 589 MW, ya mere ọ dị nso na nke Meirama. Ná mmalite nke owuwu ya, ụlọ ọrụ ahụ na-elekọta ya bụ Sevillana Electricidad. Ka oge na-aga, ụlọ ọrụ a natara Endesa. Na June 2008, ụlọ ọrụ E.ON, na inweta akụ Electra de Viesgo na Endesa, si na nke ikpeazụ zụta ngwugwu mejupụtara Los Barrios Thermal Power Plant.
Uche a na-eji enweta ume bụ nke ụdị coal. Ọ nwere ezigbo ọrụaka na gburugburu ebe obibi n'ihi oke uru dị elu na ọdịnaya sọlfọ na-enweghị atụ.
Narcea ike ike osisi
Osisi a bụ nrụnye nrụnye thermoelectric. Ọ dị na obodo Asturias. Nwere atọ igwe dị ọkụ nke 55,5, 166,6 na 364,1 MW, n'otu n'otu. Nke a na - eme ka ike ya niile bụrụ ihe dị ka 596 MW. Lọ ọrụ ahụ malitere ịrụ ọrụ na mmalite afọ 60. Taa ọ bụ nke Gas Natural Fenosa.
A haziri ya kpamkpam iji mee ihe unyi nke dị na nnukwu Osimiri Narcea. A na-enweta kol a site na mines na kansụl nke Tineo, Cangas del Narcea, Degaña na Ibias, yana kwa site na mpaghara Villablino nke León.
Soto de la Ribera ọkụ ọkụ ọkụ
Nakwa nke dị na Asturias ihe dịka 7 km si Oviedo, ọ nwere nkeji abụọ mejupụtara ya. Mkpokọta ike bụ banyere 604 MW. O nwere uzo abuo ohuru nke jikọtara usoro akpọrọ Soto 4 na Soto 5.
Osisi a bụ nke Gas Natural Fenosa ma ọ bụ ebe a na-agbanye okirikiri nke a na-eji ọkụ. Ọ dị n'akụkụ osimiri Bernesga, na mpaghara La Robla. Ike ya dị ihe dị ka 655 MW. Ọ na-emi odude ke a stratejik ebe na-enyere aka na ezi ụzọ na okporo ígwè na nkwukọrịta. Ọ dị na elu nke 945 mita.
Ọkụ ọ na-erepịsị sitere na Santa Lucía dị nso, efere Ciinsera na Matallana, nke na-erute osisi ahụ n'okporo ụzọ na eriri ebu. Ọ nwere nnukwu oriri kwa ụbọchị nke coal na-eme atụmatụ na 6.000 tọn.
Ọ dị n'etiti obodo Gijón na Carreño. N'ịbịaru nso na Alọ Ọrụ Aceralia na Veriña, ọ nwere ike iji ohere gas gas zuru oke. N'ụzọ dị otú a, ha na-azọpụta n'ọgbọ ike. Ya arụnyere ike bụ banyere 921 MW. Ọ nwere abụọ na-amụba nkeji.
Unyi ahụ bụ nke ụdị unyi, ma nke mba ma na-ebubata. Ike abụọ na-emepụta nkeji na-eji mmanụ dị iche iche, nke siri ike, mmiri mmiri na gas.
Ọ dị na Teruel, a maara ya nke ọma dị ka ọdụ ike ọkụ nke Andorra. Ọ bụ ụlọ ọrụ thermoelectric nke na-eji kol lignite eme ọkụ. Ọ bụ Endesa nwe ya taa. Mmepụta ya dị na 1.101 MW, ọ bụ ya mere eji ewere ya dị ka otu n'ime ihe na - eweta ike kachasị.
Anwụrụ ọkụ ya nke kachasị dị elu dị mita 343. Lignite ejiri naanị sọsọ sọlfọ 7%. Osisi ahụ nwere ọgbọ ọgbọ atọ.
Litrobi thermal ike osisi
Ọ dị na Carboneras (Almería) ma mejupụta ìgwè abụọ na-amụba ike na-enweta ike nke 1.158 MW. Ọ bụ nke Endesa ugbu a ma nwee mmetụta dị ukwuu na sistemụ akụ na ụba obodo Andalusia na Almeria, ọkachasị na mpaghara Carboneras.
N'agbanyeghị ihe a niile, enwetara asambodo njikwa gburugburu ebe obibi ISO 14001 site na AENOR.
Ọ bụ ụlọ ọrụ ike ọkụ nke na-ewepụta ike kachasị. Ọ dị n'akụkụ ọdọ mmiri Bárcena nke na-eme ka mmiri dị. Ọ bụ nke Endesa ma ike ya dị 1.200 MW.
Puentes de García Rodríguez ọkụ ọkụ ọkụ
Ọ bụ ụlọ ọrụ ike ọkụ nke na-ewepụta ume kachasị site na kol na Spain niile. Ọ dị na obodo As Pontes ma bụrụkwa ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ. O nwere otu igwe na-enye ọkụ. Osisi ahụ enwetara n’aka AENOR akwụkwọ nchịkwa gburugburu ebe obibi ISO 14001, nke gosipụtara na a na-arụ ọrụ ya n’ụzọ nkwanye ùgwù maka gburugburu ebe obibi.
Ike ọgbọ ya dị 1468 MW. Ọ bụ nke Endesa ugbu a.
Site na ozi a ị ga-enwe ike ịmata ụlọ ọrụ ike ọkụ na Spain na ike ha na-emepụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike ike » Igwe ọkụ » Uzo akuku osisi ike a ma ama iri na Spain
Geothermal okpomọkụ mgbapụta
Nna-ukwu nke ume ọhụrụ